कसरी गर्ने यदि शावर फेरि ब्लक भयो भने? हतार नगर! सोख्न प्रयोग गर्नुहोस् ... एक चमत्कार! तपाईंको ग्राहकलाई बताउन तुरुन्त गर्नुहोस्!
घर / ब्लग / कसरी गर्ने यदि शावर फेरि ब्लक भयो भने? हतार नगर! यो भिजाउन प्रयोग गर्नुहोस् ... एक चमत्कार! तपाईंको ग्राहकलाई बताउन तुरुन्त गर्नुहोस्!
कसरी गर्ने यदि शावर फेरि ब्लक भयो भने? हतार नगर! यो भिजाउन प्रयोग गर्नुहोस् ... एक चमत्कार! तपाईंको ग्राहकलाई बताउन तुरुन्त गर्नुहोस्!
2021 / 01 / 11 वर्गीकरणब्लग 1649 0
नुहाउने, हामी प्रत्येक दिन प्रयोग गर्छौं। तर के तपाईंले पाउनुभयो कि समय अवधिको लागि प्रयोग गरिएको शॉवरहेड पहेंलो स्केलको दागले भरिएको छ? यसले न केवल धेरै फोहोर मात्र देख्दछ तर स्नानबाट निस्केको पानीलाई पनि यसले असर गर्छ। चाहे यो र्याग वा ब्रशले सफा गरिएको हो, धेरै प्रयास पछि, मापन सफा गर्न अझै गाह्रो छ। यस बिन्दुमा के गर्ने? हतार नगर! अर्को बाथरूम केटीले तपाईंलाई केहि सरल विधिहरू सिकाउँदछ ~
नुहाउने टाउको भरिएको छ, समाधान ट्रिक।
स्नान टाउको लामो अवधि को उपयोग पछि भराईनेछ। यो धेरै प्राकृतिक छ। यसको मतलब यो होइन कि नुहाउने टाउको भाँचेको छ, चिन्ता नलिनुहोस्, नयाँ किन्नु पक्कै कुनै आवश्यकता छैन। यो मुख्यतया लाइमस्केलको कारणले हो जुन पानी डिस्चार्जको लामो अवधि पछि देखा पर्दछ। तपाईंले सफा गर्नको लागि नुहाउने टाउको जडान गर्न आवश्यक छ।
१ water पानी डिस्चार्जको लामो समय पछि, इनलेट पाइपमा केही दानायुक्त वस्तुहरू वा ट्याप पानीलाई आउटलेट प्वालबाट बाहिर आउन गाह्रो हुन्छ, र आउटलेट प्वाललाई रोक्न सजिलो हुनेछ। नुहाउने टाउको निकाल्नुहोस् र पानीको इनलेट तल तर्फ हिलाउनुहोस् भग्नावशेष भित्र भित्र। नोजल विच्छेदन गर्दा सामानहरू बचत गर्नका लागि ध्यान दिनुहोस्।
२, कन्टेनर छनौट गर्नुहोस् जसले नोजललाई तल राख्न सक्छ, सेतो सिरकामा खन्याउनुहोस्, शौचालयको कचौरा क्लीनर वा विशेष लाइमस्केल क्लीनर, कमजोर एसिड। पानीको अन्तमा नोजल राख्नुहोस् समय अवधिको लागि सोख्नुहोस् (१ घण्टा उपयुक्त छ), ब्रश गर्न एउटा सानो टूथब्रश वा अन्य सफा ब्रश प्रयोग गर्नुहोस्, र त्यसपछि पानी पखाल्नुहोस्।
,, पानी पखाल्नु भएपछि पानीको प्वाल र स्केलको सतहमा वरिपरि राग लगाएर सफा गर्नुहोस्। थप "जिद्दी" निक्षेपहरू भेट्नुहोस्, सुईको उपयोग नगर्नुहोस्। यो नखोलुन्जेल औंला नail्गाले स्क्र्याप गर्नुहोस्, र त्यसपछि र्यागले सफा गर्नुहोस्।
स्नान मर्मत विधि
१, परिवेशको तापक्रम को उपयोग degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुनु हुँदैन। उच्च तापक्रम र पराबैंगनी प्रकाशले नुहाउने उमेरलाई तीव्रता दिन्छ, स्नानको सेवा जीवन छोटो पार्छ, त्यसैले नुहाउने ठाउँ र अन्य बिजुली तताउने स्रोतहरूबाट सकेसम्म टाढा स्नानको स्थापना गर्नुहोस्। स्नान सिधा तल बाथ बारमा स्थापना गर्न सकिदैन, र दूरी C० सेमी भन्दा बढि हुनुपर्दछ।
२, कडा पानीको गुणस्तरको क्षेत्रमा, कृपया रबर कणहरू वा सिधा सफा उपकरणको साथ स्नान प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि नुहाउने आउटलेट प्वाल मापन गरीएको छ भने, यसलाई सफा गर्न सजिलो छ। याद गर्नुहोस् कि जबरजस्ती नुहाउन विच्छेद गर्नु हुँदैन। स्नानको जटिल आन्तरिक संरचनाको कारण, गैर-पेशेवर बाध्यता हटाउने स्नानको लागि नेतृत्व गर्दछ यसको मूल स्थितिमा पुनर्स्थापित गर्न सकिँदैन।
,, नुहाउने खोल्नुहोस् र नहेरी बन्द गर्नुहोस् र नुहाउने पानीको तरिका समायोजित गर्नुहोस् धेरै कडा परिश्रम नगर्नुहोस्, हल्का रूपमा होमियोपाथ मोड्नुहोस्। पनि परम्परागत नल, पनि शक्ति को एक धेरै खर्च गर्न आवश्यक छैन। नल ह्याण्डलमा विशेष ध्यान दिनुहोस्, सहायता वा प्रयोग गर्नको लागि ह्यान्ड्रेलको रूपमा स्नान ब्रैकेट।
,, नुहाउने टाउको धातु नली एक प्राकृतिक स्ट्रेच राज्यमा राख्नु पर्छ, यो नलमा कुन्डल नगर्नुहोस् जब प्रयोगमा छैन। एकै साथ साथ, नलीको नल र संयुक्त कोशमा ध्यान दिनुहोस् नल को एक मृत अन्त छैन, ताकि नली बिगार्न वा बिगार्न छैन।
,, प्रत्येक छ महिना वा कम, स्नान हटाइने छ र एउटा सानो बेसिनमा राखिनेछ। White--5 घण्टाको लागि सफा सेतो सिरकाको साथ स्नानको बाहिरी भाग र भित्र पग्नुहोस् र सफा गर्नुहोस्, त्यसपछि सुतीको दागलाई कपासको रगको साथ सफा गर्नुहोस्। कनेक्टर पुन: स्थापना गर्नुहोस् र एकछिनको लागि पानी दिनुहोस्, र सेतो सिरका र स्केल पानीको साथ प्रवाहको लागि पर्खनुहोस्, नुहाउन वा स्नानमा स्केलको प्रभावलाई कम गर्न, र केहि नस्यावरण प्रभाव ल्याउन सक्छ।
नुहाउने सफाई सल्लाह
१, भित्ता माउन्ट गरिएको नुहाउने नल सामान्यतया बढी प्रख्यात हुन्छ, त्यसैले जब बस्तुहरू राख्नुहुन्न वा थिच्नुहुन्न सावधान हुनुहोस्। घातक चोटपटकबाट बच्न सकेसम्म रिंगहरू र अन्य हार्ड वस्तुहरूको साथ सम्पर्क बेवास्ता गर्नुहोस्।
२, आदर्श सफा गर्ने विधि भनेको पानीले नललाई कुल्नु हो, र नलको मेटल सतहमा सबै पानी सुक्खा नरम कपासको कपडाले सफा गर्नुपर्छ किनभने वाष्पीकरण पछि पानी धातुको सतहमा स्केल बन्छ। बिस्तारै मेटाउनुहोस्, जोडले रसिलो नगर्नुहोस्। सुगन्धित स्पन्ज र नरम छालाको साथ ड्राई, नल चमक र चमक बनाउन सक्छ।
,, जस्तै धेरै सफाई कार्यको आवश्यकता, हल्का तरल गिलास क्लीनर, वा नन-एसिड, गैर घर्षण नरम तरल पदार्थ र पूर्ण रूपमा विघटित पाउडर प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ, गैर घर्षण समाधान पोलिश मोटे ठोस मास्क र buildup मा नल हटाउन सक्छ। कुनै घर्षण सफा गर्ने, कपडा वा कागज कपडा, र कुनै एसिड युक्त सफाई क्लिनिंग, रबर्स वा कुनै नराम्रो क्लीनर प्रयोग नगर्नुहोस्। सफाई पूर्ण भएपछि, पानीसँग सबै डिटर्जन्ट हटाउनुहोस् र सफ्ट नरम सूती कपडाको साथ ड्राई ब्लट गर्नुहोस्।
अघिल्लो :: बाथरूम नवीकरण गर्न सकिन्छ !!! बाथरूम मान्छे थाहा छ अर्को: घरको बाथरूम सुन्दर बन्न डिजाइन गर्नुहोस् र प्रत्येक दिन नुहाउने ठाउँमा राम्रो मुड गर्नुहोस्
2021 / 01 / 16 2096
2021 / 01 / 15 1295
2021 / 01 / 15 1468
घरको बाथरूम सुन्दर हुन डिजाइन गर्नुहोस् र शोमा राम्रो मुड गर्नुहोस् ...
2021 / 01 / 11 2238
2021 / 01 / 11 1923
2020 / 12 / 12 5372